Saa'udii irraa gara Itoophiyaa, Itoophiyaa irraa Gara Saa'udii - BBC News Afaan Oromoo
Saa'udii irraa gara Itoophiyaa, Itoophiyaa irraa Gara Saa'udii
Goodayyaa suuraa Lammiileen Itoophiyaa Sa'udii irraa gara biyyaatti deebi'an, gara Sa'udiitti deebi'aa jiru.
Mootummaan Saa'udii lammiileen Itoophiyaa seeraan ala biyyattii keessa jiraatan biyyattii gadi dhiisanii akka bahan ajajuu isaattin wal qabatee, lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman gara biyyaatti deebi'an, osoo xiqqoo hin turiin karaa seeran alaa gara Sa'udiitti deebi'aa jiru.
Dargaggoo Abbaadii Kaalaayyuu oduu ebelu Saa'udii deemee duroome jedhu dhagahaa waan guddateef baruumsa isaa kutaa 8ffatti adda kutee gammoojjii sahaaraa qaxxaamuree garasitti qajeele.
Daraggeessi murii ganna 18 kun wayita Saa'udii gahu kan isa eeggate kan dhagahaa guddateen adda.
Mana hidhaa Magaalaa Jiddaa keessa waggoota sadiif akka hidhameefi achittis dararaan hedduun akka isarra gahe dubbata.
Lammiileen biyyoota biro gama Imbasii biyya isaaniitiin fayyaaniifi dhimmi isaanii mana murtiin wayita hordofamu, lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa sana keessa turan namuu garagalee hin ilaalu ture jedha.
Turtiin waggoota sadiif mana hidhaa san keessatti dabarses baay'ee rakkisaa akka ture BBC'tti hime.
"Haga fedhe seeraan ala taanullee gama Imbaasiitiin deeggarsi nuuf godhamuu qaba ture," jedha.
'Wanti TV irraatti haasa'amu dhara'
Takliit Biraanees ijoollummaan ture gara Sa'udii kan deeme. Ajaja mootummaan Sa'udii baaseen lammiilee Itoophiyaa gara biyyaatti deebi'an keessaa tokko.
Gara biyyaatti gaafa deebi'u, mootummaan Itoophiyaa warra deebi'aniif carraa hojii akka uumu fi liqii akka kennuu miidiyaa irraa waan dhagaheef abdii guddaa waliin ture.
Erga biyya gahe wanti inni ganda dhaloota isaa keessatti arge "abdii nama kutachiisa," jedha.
"Qaamni mootumma nu dubbise tokko hin jiru, wanti miidiyaa irratti haasa'amaa ture hundi lafarra hin jiru, wanti TV irraa haasa'amu dhara" jechuun BBC'tti hime.
Gara Sa'udiitti yoo deebi'ee waan isa mudatuu fi dararaan hanga achi gahuutti jiru hagam ulfaataa akka ta'e osoo beekuu, ija jabaatee gara Sa'udiitti akka deebi'e dubbata.
Goodayyaa suuraa Sa'uudii galuuf, gammoojjii Yaman qaxxaamuruun ulfaataa dha.
Sababa ajaja mootummaa Sa'udiitiin gara biyyaatti kan hin deebine obboleessi isaa angafaa, Takliit gara Sa'udiitti akka deebi'u dallaalotaaf qarshii kuma 13 kafaluu isaafi obboloonni isaa shamarranii lama gara Itoophiyaatti deebi'anii turanis gara Sa'udiitti deebi'uuf gammoojji Yaman keessa akka jiran BBC'tti himeera.
Obbolaa shammaranii gammoojjii Yaman keessa jiran gara Sa'udiitti dabarsuuf qashii hanga kuma 50 gaafatamuu isaafi haalli jiru rakkisaa ta'uus himeera.
Namoonni Sa'udii irraa dhufanii gara Sa'udiitti deebi'aa hedduun ofii isaanii qofa osoo hin taane ijoollota umuriin isaanii ganna 18 gadi ta'e baay'inaan fuudhanii akka deebi'anis ni dubbatu.
Naannoo Tigraayitti bulchaan aanaa Atsbii Wambartaa, bakka dhaloota dargaggoota kanneenii, Obbo Haftoom Wurataa, namoonni Sa'udii irraa deebi'an, baay'inaan deebi'anii gara Sa'udii deemuun isaanii dhugaadha garuu waan haalli mijaataan hin uumamiiniif miti jechuun bilbilaan BBC'tti himaniiru.
Gariin isaanii Itoophiyaa seenanii osoo bakka dhaloota isaanii hin gahiin garasitti akka deebi'an kan himan obbo Atsbiin, mootummaan dargaaggoota kanneen gurmeessee hojiitti galchuuf yaalii gochaa ture jedhu.
"Rakkoon cimaan biyyakoo keessatti hojjedheen naaf darba ilaalcha jedhu caalaa, gara biyya alaa deemeen naa darba kan jedhu sammuu dargaggoota hedduu keessa jiraachuu isaa," ta'uu dubbatu.
Sadarkaa biyyaatti dhimmi kun maalirra akka jiru baruuf waajjiraalee mootummaa dhimmichi ilaallatutti bilbillee yaaliin goone hin milkoofne.